Townhouse 2km Airport Free yokupaka kunye nesidlo sakusasa
Imizuzu emi-3 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya iMelb Iyonke indawo yokulala eyi-2 yeTownhouse enegumbi lokuhlambela laBucala w/Ishawa enkulu kunye neYangasese yesiBini. Igumbi lokuhlala w/ 2 isitulo Ibhedi yeSofa- 2 x Smart Tv w/ Netflix Ukutya okwahlukileyo okanye indawo yokufunda w/ indawo yokusebenzela & ne-wifi. Ifeni ephathwayo kunye ne-3 x yeSixokelelwano sokuHlukana isilungisi somoya / Ukufudumeza kwigumbi lokulala ngalinye nakwiLounge. Ikhitshi laseKhaya linazo zonke izinto eziyimfuneko ekuphekeni, igesi eyi-4x yesitovu sesitshisi kunye ne-oveni, imicrowave, ithowusta, kunye nazo zonke izinto zokucheba, iipleyiti zeglasi +Ifriji Off Street Parking x 2. Indawo yangasemva yabucala
Le ndlu yedolophu ikwindawo evaliweyo yezindlu yabucala enegadi ekwabelwana ngazo, inkundla yentenetya kunye nephuli ezinokufikelelwa ziindwendwe. Kukhuseleke kakhulu ukuba abantwana badlale ngaphandle kwetrafikhi kwaye inika ukhuseleko olukhulu kunye ne-complex yonke ephantsi kweliso leCCTV. I-Undercover carport carpark ibonelelwe. Kukho indawo enkulu yenkundla yabucala ngasemva kwendlu yedolophu. Ipropathi iqulathe zonke izixhobo zombane ezitsha kunye nezinto ezihlaziyiweyo kunye nokufakelwa. Ibanzi kakhulu kwaye inika ubumfihlo obukhulu. Isidlo sakusasa sasimahla, iTi yeKofu kunye naManzi afakiwe
4.74 · Izimvo eziyi-119
IVenkile yeVenkile ye-7/11 yindawo elandelayo yazo zonke iisnacks, ikofu kunye nezinto ezibalulekileyo. Intabalala yokutya kunye nokhetho lokuhamba kuphela umgama wokuhamba. Kufuphi ke kwisikhululo seenqwelomoya (Ngaphantsi kwe-$10 yeteksi okanye i-Uber yokukhwela) kuphela imizuzu emi-3! Ikufutshane kakhulu kuzo zonke iindlela ezinkulu kunye noohola bendlela abaya esixekweni nakwiindawo ezingaphandle.
37 yr Old Australian Non smoker Like to get out in the outdoors Regularly Travelling - Asia, America , Indonesia Outgoing and looking to meet new people Father of 7 year old boy Sports Enthusiast Business Broker Italian and Polish mixed background Love to dine out and eat almost anything Surf, sun and swimming - I love the summer I also love music and all kinds - (semi - retired musician) I am a people person - I love socialising with people and helping others. I am relaxed and easy - going - run anything past me and if it sounds reasonable then I don't have a problem, also happy to help with your trip and tips on where to go locally. Look forward to meeting you.
37 yr Old Australian Non smoker Like to get out in the outdoors Regularly Travelling - Asia, America , Indonesia Outgoing and looking to meet new people Father of 7 year old boy Sp…
Eli likhaya labucala, andihlali apho, nangona kunjalo ndikwimizuzu eyi-10 kuphela kwaye ndiyafumaneka ukuba ndifowunelwe ngemibuzo okanye ukuba ufuna nantoni na. Ndingalungiselela ukuba ndikujonge ngokwakho.